UMatsimela ufisa alunge amaphepha kaDylan Kerr
LUNGILE MAJOKA | January 17, 2020
IPHINI lomqeqeshi kwiBaroka FC, uThoka Matsimela, lilobizela ukuthi alunge amaphepha okusebenza eNingizimu Afrika omqeqeshi uDylan Kerr ongakaze ahlale ebhentshini emidlalweni emithathu edlule ye-Absa Premiership.
UKerr umenyezelwe kade kuvalelwe ikhefu likaKhisimusi njengozothatha izintambo emuva kokushiya kukaWedson Nyirenda emuva komdlalo wokugcina ngoDisemba.
Kodwa umqeqeshi oyisakhamuzi sase-England, ubesalinde imvume yokusebenza eNingizimu Afrika. Lokhu kuphoqe ukuthi uMatsimela abe sebhentshini bedlala neCape Town City, Lamontville Golden Arrows nakodlule lapho behlule khona iPolokwane City ngo 1-0.
Kweminye imidlalo bahluliwe.
Amaphuzu amathathu abawathole ngokushaya iCity ababeke kwawu-17 endaweni ka-13. Nokho lokhu akusho ukuthi baphephile ezembeni njengoba belingana ngamaphuzu namanye amaqembu angemuva kanti basele ngelilodwa kwiPolokwane City esemsileni.
Kusasa iBaroka izovakashela iStellenbosch FC emdlalweni ose-Athlone Stadium ngo-8 ebusuku.
Ekhuluma ngemuva komdlalo weCity, uMatsimela uthe wethemba ukuthi uKerr uzobe esekhona kolandelayo.
“Sikhona isikhala sakhe (ebhentshini). Kunzima kakhulu ukuzibeka esimeni somunye umuntu. Ukube yimina bengizokwazi ukuthatha izinqumo ngakho konke. Kodwa ngithemba ukuthi uzobe esekhona emdlalweni olandelayo,” kusho uMatsimela.
Emuva kokunqoba uthe wethemba ukuthi bazokwakhela phezu kwalo mphumela ngoba miningi nemidlalo asebeshaywe kuyo.
“Ngithemba ukuthi sizokwazi ukuqhubeka. Leli yigxathu elihle. Kuzomele sibhekane nomdlalo ngamunye. Miningi imidlalo esihlulwe kuyona. Ngethemba ukuthi singakwazi ukuwina emithathu noma emine elandelayo.”
Ngemuva kokudlala neStellenbosch bazodlala neMaritzburg United.
Ngesizini edlule uKerr usindise iLeopards ezembeni ngaphambi kokuthi ashiye ngoba efuna isikhathi sokuhlala nonina obegula ogcine ngokudlula emhlabeni ngoSepthemba.
Ekhuluma ngokuqashwa kwakhe kwiBaroka kwiSowetan Live, uthe amava eLeopards asho ukuthi uyakuqonda okumele akwenze.
“Abantu abaningi bathi iBaroka iyiqembu elihle kodwa indawo ekuyona kwiPSL ayiwona amanga. Kukhona okumele kulungiswe. Sengike ngaba sesimeni esifanayo nyakenye ngesikhathi ngifika kwiLeopards ngakho ngiyakwazi okumele kwenziwe,” kusho uKerr.